Izindaba - Zingaki izindlela ezingasetshenziswa ukumaka ukwakhiwa?
—ISIKHATHI SEZINDABA ——
IKHAYA> IZINDABA> Izindaba Zemboni> Ukwethulwa okuningiliziwe komshini wokumaka oshisayo oshisayo
Abstract: Ububanzi bolayini bomshini wokumaka uhlobo lokuchofoza ngesandla kunqunywa ububanzi be-hopper, imvamisa okuyi-100mm, 150mm, 200mm. Izingubo ezishisayo ezincibilikayo zidinga ukufudunyezwa zibe phakathi kuka-180-230 degrees Celsius ukufaka isicelo.
Indlela yokwakha ukumaka ingahlukaniswa cishe ibe yindlela yokumaka yesandla kanye nendlela yokwakha yemishini kusuka kumphumela womshini wokudweba wolayini. Ukumaka okwenziwa ngesandla kuyindlela yokwakha ebaluleke kakhulu futhi esetshenziswa kakhulu ekwakhiweni kokumaka okushisayo. Ububanzi bokumaka bomshini wokumaketha ngesandla bunqunywa ububanzi be-hopper, imvamisa okuyi-100mm, 150mm, 200mm. Upende oshisayo oshisayo weumenzi wokumaka umgwaqoidinga ukufudunyezwa ibe ngu-180-230 degrees Celsius ukuze isetshenziswe. Umgomo wokusebenza wokumaka isandla ngokucindezela ukusebenzisa indlela yokumboza eshibhile. Ngesikhathi sokwakhiwa, upende ofana nekhava ufakwa encibilikeni elishisayo Kugedlela, ngemuva kokuncibilika nokugeleza, likubeke emgqonyeni wokushisa wokushisa womshini wokumaka ngesandla. Lapho kumakwa, upende oncibilikisiwe ungeniswa ebhakedeni lokumaka. Ibhakede lokumaka libekwa ngqo ebusweni bomgwaqo. Ngoba kukhona igebe elithile phakathi komugqa wokumaka nomhlabathi, lapho umshini wokumaka ucindezelwa, uzosuswa ngokugeleza okuzenzakalelayo. Ukumaka. Ngenkathi uklwebha umugqa wokumaka, umshini wokubhala ungasakaza ngasikhathi sinye ungqimba lobuhlalu beglasi obukhanyayo ebusweni obufanayo bomugqa wokumaka.
1. Ubuhle balokhu indledlana yokucindezela ngesandla yomshini wokumaka oshisayoukuthi inemishini yokwakha encane, impilo yenkonzo ende, futhi ingasetshenziswa iminyaka engu-3-5. Umphumela wokumaka ungcono, ikhono lokulwa nokungcola linamandla, lingagcina ukucaca isikhathi eside, linamathela kahle, ukumelana nokugqoka okuhle nokuqina. Ukwakhiwa kwezingubo ezishisayo ezincibilikayo kufanele kulungiselelwe kusengaphambili, njengokuthunyelwa kwesexwayiso, amathuluzi asizayo, izimpawu zokuxwayisa ngokwakha, namabhodi okudweba adingekayo, amafonti, njll. Ukushaywa kwamatshe kugandayiwe: okokuqala, yenza ukwelashwa okuyisisekelo kwendlela egandayiwe, futhi ususe umgandayo imfucumfucu. Uma imfucumfucu egandayiwe kunzima ukuyisusa ngezindlela ezivamile, sebenzisa okokukhipha ibhulashi lensimbi ngensimbi ukuze uyisuse kanzima, bese usebenzisa okokuhlanza umoya ukushaya imfucumfucu egandaywe ngamatshe, ekugcineni ufinyelele ezingeni lokuhlanza umgandayo elihlangabezana nezidingo zokumakwa.
2. Isiteki Sokwakha: Ngokwengxenye yesigaba sokwakha, ngokusho kwemidwebo yokwakha kanye nezidingo zobuchwepheshe, linganisa inkokhelo yokwenza lula ukulawula amazinga ezokwakha. Ngemuva kokuphothula ukufakwa, yenza ukuhlolwa kokuqala. Ukuhlolwa kokuqala kuyakufanelekela, bese kuthi unjiniyela wokuqondisa acelwe ukuthi akwamukele. Inqubo elandelayo ingenziwa kuphela ngemuva kokwamukelwa. Ukunakwa kokwakhiwa kokumakwa komgwaqo: Ngesikhathi sokwakhiwa, qala usebenzise isihlanzisi somgwaqo esinamandla ukuze uqhephule ukungcola kanye nenye imfucumfucu emgwaqeni ukuze kuqinisekiswe ukuthi umgwaqo awunazo izinhlayiya ezikhululekile, uthuli, i-asphalt, uwoyela nenye imfucumfucu ethinta ikhwalithi yokumaka neyomile.
3. Bese usebenzisa umshini okhokhelwayo othomathikhi nokusebenza okusetshenziswayo okwenziwa ngesandla ukukhipha ucingo engxenyeni yokwakha ehleliwe ngokuya ngezidingo zokwakhiwa kobunjiniyela, bese usebenzisa isifutho se-ejenti engaphansi komoya engenawo umoya ophansi ukuze ufafaze uhlobo olufanayo nenani njengoba unjiniyela wokugunyaza evuma Ngemuva kokuthi i-primer (primer) isomiswe ngokuphelele, umshini wokumaketha owushisayo ozishintshayo noma ukuhamba ngemuva kwe-hot-melt marking machine kuzosetshenziselwa ukumaka.
Ngaphambilini: Ingabe ukumaka kuyasula ukucaciswa kwento yokuhlunga ekhethiwe kuthinta?